Ogaden News Agency (ONA) – Dooni ay la socdeen Tahriibayaal Afrikanka ah oo ku Dagtay Xeebaha Liibiya.
Dooni ay la socdeen Tahriibayaal Afrikanka ah oo ku Dagtay Xeebaha Liibiya.
Sida ay sheegayaan warar la xaqiijiyay waxaa ku degtay dooni ay la socdeen in ka badan labo boqol 200 oo tariibayaal ah oo marayay xeebaha dalka Liibiya. Waxaana dadka doonta la socda la sheegay in ay ka mid ahaayeen muhaajiriin ka tagay wadamada Bariga Africa.
Ilaa iyo hadda waxaa la helay maydadka shan ruux oo la sheegay in ay dul heehaabayeen biyaha badda, walina waxaa socda baadigoobka dadkii kale ee ku dhinta doonta dagtay. sanadihii ugu dambeeyayba waxaa sii kordhayay dadka ka soo tahriibaya xeebaha dalka Liibiya kuwaas oo doonaya in ay gallaan dalka Talyaaniga.
Hay’ada IOM oo u qaabilsan dadka soo galootiga ah QM ayaa waxaa ay sheegeen in labaatan kun oo tahriibayaal ah ay gaadheen dalka Talyaaniga waxaana la sheegay in dad gaadhaya 559 tahriibayaal ah ay dhinteen ama lagu la’ yahay badda.
Dowladda Talyaaniga ayaa sheegay in wali dhinacooda uusan soo gaadhin warka ku saabsan doonta degtay, hasse ahaatee haddii loo baahdo ka qaybqaadanayaan baadigoobka dadka meydkooda la yahay.